Nhau - Maitiro ekukurumidza kutsiva bhegi reguruva remutori weguruva?
Kazhinji, bhegi reguruva reguruva rinobviswa rinopfekwa zvishoma nezvishoma, uye chikonzero chikuru chekupfeka kweguruva bhegi isimba rinokuya guruva. Uye zvakare, kune zvekare zvikonzero zvekusakara kwefirita zvinhu uye ngura yemakemikari zvinhu zvinokonzerwa netembiricha yakakwira.
Kana simba rekukuya reguruva rakasimba kwazvo kana guruva rikaungana kune imwe nhanho, pasi pebhegi reguruva rinenge rakapfeka zvakanyanya. Uye zvakare, iko kuwedzera kwekusefa kumhanya kuchatungamirawo kune kusakara kweguruva bhegi. Kana bhegi racho rakuvara, bhegi rakakuvadzwa rinofanira kuchinjirwa nekukurumidza sezvazvinogona kudzivirira kukurumidza kutsvaira kweanotora guruva. Nekudaro, kana paine gomba diki chete muhombodo yeguruva, unogona kushandisa bhegi reguruva rekare pane kuritsiva zvachose. Nekudaro, kana bhegi reguruva rakakuvadzwa munzvimbo hombe, rinofanira kutsiviwa zvizere. Kana uchitsiva bhegi reguruva rekubvisa guruva, tanga wamisa mashandiro emidziyo yekubvisa guruva, wobva wavhara guruva controller uye ubatanidze bhegi reguruva. Kana uchiburitsa bhegi reguruva, tora bhegi kutanga, wobva wadzvanya rin'i yechirimo pamuromo webhegi reguruva muchimiro chakaita concave, woburitsa bhegi rakakuvadzwa kumusoro.
Usati waisa bhegi idzva reguruva, zvinofanirwa kuchenesa guruva rinodonha kubva mugomba remaruva, wozoisa bhegi idzva. Kuisirwa bhegi reguruva kunogona kunzi ndiyo inonyanya kungwarira uye inoshivirira chikamu cheese ma link. Paunenge uchiisa bhegi reguruva, ita shuwa kuti usarovera kana kukwenya bhegi reguruva nezvinhu zvakapinza. Kunyangwe kukanda kuduku kunopfupisa hupenyu hwebasa hwehombodo. Naizvozvo, kana uchiisa dedusting bhegi, isa dedusting bhegi mukati meyedusting bhegi kamuri kubva kune yemaruva ndiro gomba rebhokisi kutanga, wobva wadzvanya rin'i yechirimo pakuvhura kweiyo dedusting bhegi mune concave chimiro, uye nyatso kuiisa mukati ndiro yemaruva yebhokisi. Wobva waita mhete yechirimo kuti idzokere pachimiro chayo chepakutanga, kuti igone kumanikidzwa padenderedzwa reburi remaruva, uye pakupedzisira zvinyoronyoro ubaye bhegi keji kubva pakuvhurwa kweguruva rekubvisa jira bhegi kudzamara chivharo chekudzivirira pane chepamusoro chikamu Yeye bhegi keji inongodzvanywa paburi replate yemaruva mubhokisi remuviri.
Kuti uve nechokwadi chekuchengetedza, zvinodikanwa kuti uise bhegi rimwe rekuseta usati waisa rinotevera. Izvo zviri pamusoro ndeyokukurumidza kuchinja bhegi reguruva rekubvisa guruva. Ndinovimba inogona kukubatsira!
Post nguva: Feb-23-2020
Fume Kukwesha, Centrifugal mutsinga dzinofamba nemukaka Fan, Yakakwira Pressure Centrifugal Fan, Imwe Inlet Centrifugal Fan, Radial Nereza Centrifugal Fan, Pedza Fani,